» लभमेकिङका क्रममा किन महिलाले आँखा चिम्लन्छन् ?
११ पुष २०७७, शनिबार २२:१२
लभमेकिङ, दुई विपरित लिंगबीचको शारीरिक क्रिया मात्र होइन । यसमा शरीरसँगै भावना पनि जोडिएको हुन्छ । जब दुई व्यक्ति आपसमा इन्टिमेन्ट हुन्छन्, तब उनीहरुको दिल-दिमागमा केही प्रश्न उठ्छ ।
यौनका विषयमा हरेकसँग अनेक प्रश्न हुन्छ, तर यस सम्बन्धमा एकदमै कम व्यक्तिमात्र आफ्नो पार्टनरसँग खुलेर कुराकानी गर्छन् । अक्सर पार्टनरकाबीचमा एकअर्काको लागि केही किसिमका प्रश्न हुनेगर्छ ।
यौन सम्पर्कको बेला खासगरी पुरुषहरुको मनमा एउटा प्रश्न उठ्छ, आखिर महिलाहरु किन आँखा चिम्लन्छन् ?
कतिपयले आँखा बन्द नगर्न सक्छ । यदि आँखा बन्द गर्दैन भने केही न केही यौन समस्या छ भनेर पनि बुझ्ने गरिएको छ । त्यसो भए के यौन सम्पर्कको क्रममा महिलाले आँखा चिम्लनैपर्छ ? किन उनीहरु आँखा चिम्लन्छन् रु के छ यसको कारण ?
एक शोधबाट के थाहा भएको छ भने, जसै हाच्छ्यिु गरिन्छ, त्यसमा हाम्रो कुनै नियन्त्रण हुँदैन । हाच्छ्यु गरिरहँदा हाम्रो आँखा बन्द हुन्छ, यो स्वतस्फूर्त हुने क्रिया हो । ठिक यसैगरी महिलाहरु यौनमा चरमसुखको बेला आँखा खोल्न सक्दैनन् । खासगरी यसबेला उनीहरुको ग्ल्यान्डबाट तरल स्रावित हुन्छ, जसले दिमागलाई आँखा बन्द गर्नका लागि सन्देश पठाउँछ ।
यौन सम्पर्कका क्रममा महिलाहरुले आँखा चिम्लनुमा लाज पनि एउटा कारण हुनसक्छ । यद्यपी यस्तो लाज भने पहिलो पटकको यौन सम्पर्कमा हुने गर्छ । आफुलाई सर्वाङ्ग बनाइरहँदा उनीहरु लजाउँछन् । असहज महसुष गर्छन् । त्यही कारण उनीहरु आँखा चिम्लन्छन् ।
खासमा भन्ने हो भने लभमेकिङका क्रममा महिलाहरुले आँखा चिम्लनु सामान्य कुरा हो ।